Sweden in aad shaqo ka hesho waxay ku xirantahay inta qof aad taqaano | Somaliska
Wixii su’aalo iyo faahfaahin ah kala xiriir: 073-5051822, nyttjobb@diversitas.se ama booqo www.diversitas.se
Vilks oo isku diyaarinaya aflagaadada nabiga (scw)
June 14, 2016 at 23:28
Kulan Kun shaqaale ah iyo 10 arbetsgivare oo hal saac kaliya ah, oo mid Walba intuu sabuurad yar ku qorqoro shirkadiisa magaceeda iyo halkay ku taalo ah weeyaan.
Marka sheekadan waxaan u arkaa niman shaqadu ku badatay oo nasasho kujira waxbana masoo kordhinayaan.
Shirkadan cusub ee aad xayaysiinayso ee Diversitas-na projekt ayay kusoo qaadatay beentan waxba ma hayso.
Timirtii horeba dab loo Waa ku dheh ..!!
Sayid walal waad asiibtey runti balse coachningka shaqo ma bixiyo ee wadada ayu ku saxa oo lugu heli laha shaqada waxana hela kaliya qofka dedala
sheekadaan maahan wax jira shirkadaani waxay ushaqaynaysa qaabkii lots ka ama hagayashi shaqada lagala noqday waana dad raba iney iyagu lacag kuqataan dadka
qofkii shaqo ubaahan xirfad ha barto sitoos ahna ha u raadsado shaqada waabeen sweden shaqo mataalo iyo wey adagtahay inaad shaqo ka hesho . yaan dadka niyada laga jabin wadanka shaqo waa buuxda weliba heerkena ah lkn in laraduyo in xirfad labarto ayey ku xiran tahay shaqadu